Delestazy lavareny, fahatapahan-drano : tale enina ao amin’ny Jirama indray nalana | NewsMada
Taorian’ny fanalana ny tale jeneraly, roa volana lasa izay, tale tompon’andraikitra ambony enina be izao, ao amin’ny Jirama indray, omaly, no nesorina tamin’ny toerany. Mbola vokatry ny firongatry ny delestazy lavareny sy ny fahatapahan-drano mampikaikaika ny maro ny anton’izany.
Mitohy ny fanadiovana ao amin’ny Jirama. Nesorina ny tale jeneralin’ny Jirama, ny volana aogositra teo. Nesorina koa ny minisitry ny Angovo, ny rano ary ny akoranafo, ny faran’ny volana oktobra teo. Nanazava ny olana ao amin’ny Jirama sy ny vahaolana horaisina ny filohan’ny filankevi-pitantanana, ny alahady hariva teo. Tampoka teo, nivoaka ny fanapahan-kevitry ny fanjakana, omaly alatsinainy, nanala ny tale enina, anisan’ny tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Jirama. Nosoloina tale vonjimaika, mpisolo toerana, avokoa izy ireo.
Raha zohina ny zava-misy, misedra olana avokoa sady mifampiankina ny lafiny herinaratra, ny rano ary ny solika, ireo departemanta ao anatin’ny minisitera iray.
Efa antitra ny fotodrafitrasa jiro sy rano eto amintsika ka simba matetika. Vokany, tapaka matetika ny herinaratra ary vao mainka mihamahery vaika izany. Mandeha amin’ny herinaratra koa ny milina mampiakatra ny rano eny amin’ny toby Mandroseza ka tsy lazaina fa tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy intsony, sady efa antitra rahateo koa ny fotodrafitrasa amin’ny fitsinjarana sy ny famatsiana rano. Ritra na ambany ny haavon’ny rano, vokatry ny haintany, ka tsy afaka mamokatra herinaratra araka ny tanjany intsony ny toby mandeha amin’ny tohodrano. Tsy ara-potoana ny famatsiana solika ka mihena ny herinaratra vokarina.
Fanao tokoa ny manala na mampametra-pialana ny tompon’andraikitra voalohany na ny ambony, rehefa tsy mahavita ny iraka ampiandraiketina azy. Ny tena takin’ny vahoaka sy ny mpanjifa anefa, ny fanomezana fahafaham-po ny filany, izany hoe, jiro sy rano ampy sy sahaza ary, famatsiana solika mitohy. Ny antenainy, tsy ny fanoloana isaky ny mihetsika ny tompon’andraikitra tsy nahavita ny asany fa ny vahaolana, ny famahana ny olana ary maharitra sy tena mahomby.
Lalàna 98-029 sy 98-032
Efa ampolo taona maro ny Jirama no misedra olana. Anisan’ny takin’ny maro sy ny mpiasa ao aminy ny fanafoanana ny lalàna 98-032 , mikasika ny herinaratra, sy ny 98-029 (rano), manome alalana ny orinasa tsy miankina handraharaha amin’ny herinaratra sy/na rano nefa mandrara ny Jirama tsy hampiasa vola ka hanitatra na ambaindainy. Hany ka tsy afaka nanolo na nikojakoja ny fotodrafitrasany ny Jirama satria tsy manam-bola na mindrana vola fa ny orinasa tsy miankina indray no vatsin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Ny vahoaka malagasy sy ny taranany anefa no hanonitra ireny vola ampiasain’ny tsy miankina ireny.
Efa nisy ny fifanarahana nofoanan’ny fanjakana, toy ny tamin’ny Jovena, mikasika ny toby eny Ambohimanambola. Heno matetika koa ny hamerenana ny hijerena ny fifanarahana amin’ireo mpamatsy herinaratra ny Jirama, ny fifanarahan’ny fanjakana amin’ny mpandraharaha solika. Efa an-taona maro ny nankatoavan’ny filakevi-pitantanan’ny BEI/PIN, ny famatsiam-bola (67 tapitrisa euros, tsy averina ny 37 tapitrsai euros) avy amin’ny Banky eoropeanina ho an’ny fampiasam-bola (BEI), hanavaozana ny fotodrafitrasan’ny famatsian-drano eto an-dRenivohitra, saingy izao vao antenaina hanomboka.
Ireo tale mpisolo toerana enina voatendry:
DERI (Directeur d’exploitation des réseaux interconnectés): Raoeliharivony Haja; DTOA (Directeur technique eau Antananarivo): Rakotonandraina Solofonantenaina; DPE (Directeur production d’électricité): Raolison Alfred; DPRA (Directeur principal région Antananarivo): Andriamahefa Minosoa; DAL (Directeur approvisionnement et logistique): Razanamparany Jouvelin; DCom (Directeur communication): Randrianarison Fenosoa